Ukuphupha iibinoculars ▷ ➡️ Discover Online ▷ ➡️
Iibinoculars zisivumela ukuba sibone izinto ezikude. Xa sijonga ngamehlo, oko sikubonileyo kusondela kuthi. Singazibona iinkcukacha ezingazukubonakala ngamehlo.
I-binoculars ye-monocular okanye i-binoculars zihlala zikwanalo olu ncedo xa zibonakala njengophawu emaphupheni ethu. Ukuba sisebenzisa iibinoculars kweli nqanaba, kwimeko ethile yokulala ayisetyenziselwa ukubonwa kuphela. Amaphupha anjalo anokuba nentsingiselo ephezulu yokufuzisela. Batyhila okuninzi malunga nomntu ochaphazelekayo, ubuntu babo kunye nobomi babo. Ukutolikwa ngokuchanekileyo kwe "binoculars" isimboli yamaphupha kuhlala kuxhomekeke kwiimeko zomxholo wephupha, kunye nophuhliso lwangoku kubomi bephupha.
1 Uphawu lwephupha «iibinoculars» - ukutolikwa ngokubanzi
2 Uphawu lwephupha «iibinoculars» - ukutolikwa kwengqondo
3 Uphawu lwephupha «iibinoculars» - ukutolika kokomoya
Uphawu lwephupha «iibinoculars» - ukutolikwa ngokubanzi
Ngokusisiseko, i-binoculars emaphupheni luphawu lwekamva. Yamkelwa ngokubanzi ukuba iyaphela butyebi y ukwaneliseka ivuliwe. Kule meko, "iibinoculars" isimboli yamaphupha ixatyiswa ngokuqinisekileyo. Ulwazi oluchanekileyo ngakumbi lunokubonelelwa yile nto umntu oleleyo ayibonileyo kwiibinoculars kwimeko yamaphupha.
Nangona kunjalo, le ntsingiselo yomfanekiso wephupha ayisebenzi ngokukodwa. Ke ukutolikwa ngokubanzi kwamaphupha kucinga ukuba ukusetyenziswa kwee-binoculars ephupheni ngamanye amaxesha nako ukungathembi unokufuzisela. Ukuphupha emva koko kunokwenzeka duda ngobuhlobo okanye ubudlelwane. Uyoyika ukuxhaphazwa okanye ukungcatshwa. Unxibelelwano lomntu lunokukucinezela ngendlela ethile, lukuhluthe amandla akho engqondo nawomzimba.
Ukuba iibinoculars ziyaqhekeka kwimeko yokulala, oku kukwalumkisa ngeengxaki zemali. Ilahleko. Ukongeza, iibinoculars njengophawu lokulala kwezinye iimeko zikwabonisa ukuba ukuphupha kunamathela kubaluleke kakhulu kwezinye izinto. Ngenxa yoko, ibanjelwe umva kuphuhliso lwayo.
Ukuba uhlola abanye abantu kwimeko yamaphupha ngoncedo lwee-binoculars, oku kuphuma kwakhona ngokokuchazwa ngokubanzi kwephupha. ongenanyani gqiba. Umntu oleleyo emva koko ufuna ukubonakalisa umdla wakhe ngazo zonke iindleko.
Ukuba ubona intaka efana ne-oriole ngokusebenzisa i-binoculars ephupheni lakho, unokoyika iziganeko ezizayo esele ziphosa izithunzi zazo phambili.
Uphawu lwephupha «iibinoculars» - ukutolikwa kwengqondo
Kutoliko lwengqondo lwamaphupha, iisimboli zesimboli ekubhekiswa kuzo izicwangciso zexesha elizayo. Iphupha kufuneka libonise umntu ochaphazelekayo ukuba akufuneki acinge ixesha elifutshane. Ukuze uphumelele, kufuneka ugcine umkhondo wento ekulindeleyo kwikamva elikude.
Ngapha koko, uhlalutyo lokulala kwengqondo ngamanye amaxesha lubona ukubonakaliswa kokuzibaxa kumfanekiso wephupha "binocular". Iimfuno zokhuseleko. Umphuphi ufuna ukwazi ngokuchanekileyo ngenkqubo nganye. Akonelanga kuye ukuba alinde de kuziswe ulwazi kuye. Akaphelelwa ngumonde. Ukuba akafumani yonke into kwangoko, ibangela ukungazithembi kuye.
Uphawu lwephupha «iibinoculars» - ukutolika kokomoya
Ngokwendlela yokomoya yokutolika, uphawu lwephupha "i-binoculars" ikwabhekisa kwikamva. Uphawula ukuba apha Ubugcisa beClairvoyance.